कठै ! घरमा झोला आयो तर मान्छे आएन, नेपाल भारत सीमा बाटै कृष्ण गायब ! घरमा सासु बुहारीको रु'वाबासी (भिडियो हेर्नुहोस) -
Home News कठै ! घरमा झोला आयो तर मान्छे आएन, नेपाल भारत सीमा बाटै...
कठै ! घरमा झोला आयो तर मान्छे आएन, नेपाल भारत सीमा बाटै कृष्ण गायब ! घरमा सासु बुहारीको रु’वाबासी (भिडियो हेर्नुहोस)
कठै ! घरमा झोला आयो तर मान्छे आएन, नेपाल भारत सीमा बाटै कृष्ण गायब ! घरमा सासु बुहारीको रु’वाबासी (भिडियो हेर्नुहोस) । कठै ! घरमा झोला आयो तर मान्छे आएन, नेपाल भारत सीमा बाटै कृष्ण गायब ! घरमा सासु बुहारीको रु’वाबासी (भिडियो हेर्नुहोस)
भिडियो हेर्नुहोस् र खाेजिदिन का लागि सेयर गराै
यी बालिकाको जिन्दगीमा यो सानो उमेरमा ठुलो जिम्मेवारी थपिएको छ ।बाबाले काम गर्ने कुरा त परै जाओस् खान सम्म पनि आफ्नो छोरिको सहाराले मात्रै खान सक्छन् ।
यो पिडा बाग्लुङको बडिगाढ नगरपालिका वडा नम्बर ७ का दुर्गम बस्तिमा बस्दै आएका एक बाबा र छोरिको हो । यी दाजुको जिन्दगीमा गरिबिले च्यापेपछि जागिरको सिलसिलामा बिदेश गएका थिए । सुरुमा बिदेश जादा उनी हामिजस्तै नै हट्टाखट्टा थिए तर उनी काम गर्दैगर्दा मेसिनमा परेपछि उनको यो दयनिय हाल भयो ।
उनी भन्छन् आफू नेपाल जसोतसो बाचेर फर्किन सकियो तर यहाँ आफुले कसैबाट पनि केही सहयोग नपाएको उनी गुनासो गर्छन् । जब उनी यस्तो अशक्त भए अनि आफ्नै श्रीमतिले समेत छोरी छोडेर अन्यत्रै भागिन । नत आफ्ना नत कोहि आफन्तनै कोहि छैनन् अहिले यिनको सहारा छन त केवल सानि छोरी जो आफ्नो बुवालाई आफ्नै पाल्ने संकल्प राख्छिन् ।
Previous articleअबको एमालेको अध्यक्ष कुन? भिम रावल वा केपि ओलि कमेन्ट गर्नुहोस् !
Next articleयिनै हुन् बच्चालाई फ, काएर सुनका गहना लैजाने ठग ! प्रहरीले यसरी स’ मात्यो (भिडियो सहित)